Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeMpilo » Ichiza elitsha loMhlaza leZantrene likhusela intliziyo ekufeni
Iindaba zase-Australia eziQhekezayo • Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! • Iindaba zeMpilo
I-biotech yase-Australia kunye nenkampani echanekileyo ye-oncology, i-Race Oncology, ibhengeze ukuphumelela kophando lwe-preclinical olufumene ichiza layo i-Zantrene® iyakwazi ukukhusela iiseli zezihlunu zentliziyo ekufeni ngelixa iphucula ukubulawa kweeseli zomhlaza webele xa isetyenziswe kunye ne-anthracycline, i-doxorubicin.
Ichiza le-Race Oncology's Zantrene liboniswe ukukhusela iiseli zezihlunu zentliziyo yomntu kwi-anthracycline-induced chemotherapy death. I-Anthracycline's ngawona machiza asetyenziswayo kwaye asebenzayo achasene nomhlaza, kodwa anokwenza umonakalo omkhulu wentliziyo.
Uphando lwangaphambili lukwabonise isakhono seZantrene sokusebenzisana nee-anthracyclines esele zikhona ukuze zibulale ngcono iiseli zomhlaza wamabele.
Ngenxa yokubaluleka kokufunyanwa, i-Zantrene iya kulandelwa ngokukhawuleza kwiklinikhi kunye nolingo lweSigaba se-2b esicwangciswe ngo-2022 kwizigulane zomhlaza wamabele ezisengozini enkulu yomonakalo wentliziyo obangelwa yi-anthracycline.
Inika amandla embuyekezo yeklinikhi kunye neyorhwebo entsha evela kwimixube emitsha yeZantrene/anthracycline kunye neendibaniselwano.
Esi sisihlandlo sokuqala ukuba ichiza libonise amandla okujolisa umhlaza kunye nokukhusela intliziyo kumonakalo we-anthracycline. Oku kufunyaniswayo kunika ithemba elitsha kwizigidi zabaguli abanomhlaza kwihlabathi liphela abafumana ichemotherapy nge-anthracyclines kwaye basemngciphekweni womonakalo omkhulu nosisigxina kwiintliziyo zabo.
I-anthracyclines ziyaziwa ngokubanzi njengonyango olusebenzayo lwe-anti-cancer olwakha lwaphuhliswa kwaye lusetyenziswa kwiintlobo ezininzi zomhlaza kunalo naluphi na udidi lwe-anti-cancer agent., kuquka i-leukemias, i-lymphomas, i-neuroblastoma, intso, isibindi, isisu, isibeleko, i-thyroid, i-ovarian, i-sarcomas, i-bladder, imiphunga kunye nomhlaza wamabele. Nangona kunjalo, uloyiko ngenxa yeziphumo ebezingalindelekanga ezibi ze-anthracyclines entliziyweni zikhokelele kwiingcali ezininzi ze-oncology ukuba zinciphise ukusetyenziswa kwazo la mayeza asebenza kakhulu. Ukufunyanwa kweRace kunamandla okuguqula ukusetyenziswa kwe-anthracyclines ngokuvumela i-oncologists ukuba isebenzise la mayeza anamandla kumandla abo achasene nomhlaza ngaphandle kokoyika umonakalo osisigxina entliziyweni.
IZantrene® Inkqubo yophando yokhuseleko lwentliziyo ikhokelwa ngabaphandi abadumileyo be-cardiotoxicity, ooNjingalwazi abaNxibeleleyo uAaron Sverdlov kunye noDoan Ngo, ngentsebenziswano nososayensi onxulumene nomhlaza uNjingalwazi uNikki Verrills, kwiYunivesithi yaseNewcastle.
UNjingalwazi uAron Sverdlov wathi: "Ukuza kuthi ga ngoku, ingqikelelo yonyango olunokubakho lomhlaza olungelulo lwe-cardiotoxic kuphela kodwa, enyanisweni, ukhuseleko lwe-cardio alukavavanywa okanye lonwatyiswe, ubukhulu becala ngenxa 'yeendlela ezijolise kwizifo kukhathalelo lwempilo. Iziphumo zethu zibonisa ukuba i-Zantrene, iyeza elisebenzayo lokuchasa umhlaza, ngaxeshanye linokubonelela ngokhuseleko kwiziphumo eziyityhefu entliziyweni ukusuka kwenye yezona arhente zisetyenziswa kakhulu kwichemotherapy, idoxorubicin. Obu bubungqina bokuqala bohlobo lwayo lokubonisa ukuba kukho unyango olujolise kuzo zombini umhlaza kwaye lukhusela intliziyo! Oku kunamandla okuphucula iziphumo zempilo kwizigulana ezinomhlaza kunye nabasindileyo ngokuphucula unyango lwabo lomhlaza ngelixa bethintela ukukhula kwesifo sentliziyo. ”
Ngelixa oku kukufumanisa okutsha okunomdla, iZantrene® (i-bisantrene dihydrochloride) inembali ende yeklinikhi, ephuhliswe kwi-1970s njengendlela ekhuselekileyo yentliziyo kwi-anthracyclines  ngaphambi kokuvunywa eFransi kwi-1990s. Ngelixa ukhuseleko lwentliziyo oluphuculweyo lweZantrene lubonakaliswe kwizilingo zeklinikhi ezingaphezu kwama-50, , umbuzo wokuba i-Zantrene inokunceda ukukhusela umonakalo wentliziyo obangelwa yi-anthracyclines ayizange ibhekiswe.
Ethetha ngeziphumo zophando ezitsha, iGosa eliyiNtloko lezeNzululwazi kwiRace, uGqr Daniel Tillett uthe: “Ukufumanisa ukuba i-Zantrene inokukhusela intliziyo kwi-chemotherapy ngelixa ikwabulala ngcono umhlaza sesona siphumo 'sigqwesileyo kuwo omabini amazwe'. Ekubeni i-anthracyclines isetyenziswa kwizigidi zabaguli abanomhlaza minyaka le, kunzima ukuyichaza le mpumelelo yezonyango neyorhwebo!”
Kule modeli yangaphambili, i-Zantrene ikhusela iiseli zezihlunu zentliziyo ekonakalisweni yi-doxorubicin ngelixa isebenzisana ne-anthracyclines ukubulala ngcono iiseli zomhlaza wamabele.
Ugqatso lungenise isicelo selungelo elilodwa lomenzi wechiza ejongene nendibaniselwano ye-Zantrene kunye ne-anthracycline yokukhusela intliziyo yezigulane. Eli patent (ukuba linikiwe) lingabonelela ngokhuseleko lwendibaniselwano yechiza kunye nokusetyenziswa kwalo eklinikhi ngo-2041.
Oku kufunyanwa kokhuseleko lwentliziyo olutsha kuya kuqhutyelwa phambili ngokukhawuleza ekliniki. Imbali ebanzi yeklinikhi yeZantrene ivumela le ndibaniselwano ukuba iqhubele phambili ngokukhawuleza ekliniki.
Iingxoxo eziphucukileyo ziyaqhubeka kunye noogqirha base-Australia ukuba baqhube uvavanyo lwekliniki lweSigaba se-2b kwizigulane zomhlaza webele ezisengozini enkulu yokulimala kwentliziyo ye-anthracycline.
Oku kufunyanisiweyo kuvula amathuba amatsha entengiso ye-Zantrene yeklinikhi efanayo kunye nesakhono sorhwebo ekufunyanweni kwangaphambili ukuba i-Zantrene sisithinteli esinamandla se-FTO.
Izifundo zezilwanyana ziza kuqhutywa kwi-Q4 CY2021 / Q1CY2022.
Izifundo ezongezelelweyo zangaphambi kweklinikhi zokuphanda ukuba i-Zantrene inokuyikhusela na intliziyo ekonakalisweni ngamanye amachiza e-chemotherapeutic nawo aziwa ngokubangela ukonakala kwentliziyo.
Uphononongo olongezelelweyo ukumisela indlela yemolekyuli yomsebenzi we-Zantrene we-cardio-protective. Oku kunokuvumela ukuchongwa kwemisebenzi eyongezelelweyo yokukhusela yeZantrene.
Uphuhliso lwemixube emitsha nephuculweyo yendibaniselwano yamachiza enexabiso eliphuculweyo leklinikhi nelorhwebo.
Ukuqaliswa kovavanyo lweklinikhi yeSigaba se-2b somhlaza wamabele ngo-2022.